Hadalka Emmanuel Macron, "Xilliga ugu muhiimsan ee quinquennium" ee loogu talagalay aqlabiyadda - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE • SIYAASADDA Emmanuel Macron ayaa hadalkiisa ku daray, "xilliga muhiimka ah ee quinquennium" ee inta badan
Emmanuel Macron intii lagu jiray ereyadii hore ee hoolka ugu muhiimsan ee Élysée (sawir gacmeed).
Emmanuel Macron oo mudo dheer sugayay, oo dib loo dhigay 10 maalmood kadib markii uu dab ka kacay kaniisadda Notre-Dame Cathedral ee Paris, ayaa la qaban doonaa Habeen Khamiista. Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa soo bandhigaya tallaabooyinkeeda doodaha dambe ee qaran kadib markii xayeysiisyo horayba u foorarsaday.
« Tani waa furaha muhiimka ah ee shanta sano ah, qof kastaa wuxuu qabtaa neefsashadooda Wasiirku wuxuu noqon doonaa caawa, sida dhammaan xubnaha dawladda, Elysee Palace, oo qirtay " waxba ha ogeyn Dhexdhexaadintu ugu dambayntii waa ay sii hayaan Madaxweynaha - kaasoo " sida had iyo jeer, ayaa go'aan ka gaaraya ".
Emmanuel Macron sidoo kale kaliya ayaa martigelin doonta habeenkaas hoolka weyn ee Elysee, jeeda qaar ka mid ah suxufiyiinta 300 shir jaraa'id ugu horeysay waa inay ugu yaraan 2 saacadood, hadalka a nus saac ah, ka dibna madaxweynaha ayaa markaas ka jawaabi doona su'aalaha qolka. Iyo si rasmi ah, su'aasha ah in jiiditaankan ku saabsan: Mar kale mayno doodda weyn saxafiyiinta "Haatan wuxuu ka digay in uu yahay.
Cabbiraadka loogu talagalay qaar ka mid ah barnaamijyada hore
Laba saacadood oo aad ku qancisid, si aad u qorto xayeysiisyada iyo sidoo kale, iyo gaar ahaan barashada barbaarinta. Madaxa gobolka waa in uu " aragtiyo iyo koorso Qiyaasaha qaarkood horeyba loo yaqaan tan iyo markii ay soo daatay, sida dib u soo celinta hawlgabka yar ee sicir-bararka, ama xitaa canshuurta hoose ee fasallada dhexe.
Ka dibna, waxaa jira tallaabooyin dheeraad ah oo boolis ah: ka saarida ENA dhaleeceyn badan, gaar ahaan " baahida loo qabo in laga shaqeeyo wax badan "Mawduuc qarxid ah haddii ay jirto. The « jaalaha jaalaha ah "Ha u muuqan wakhtiga ku qanacsan sida Christine, xagjirnimada Bordeaux saacad ugu horeysay:" Xaqiiqdii waxay noqon doontaa hal erey oo dheeraad ah, maxaa yeelay xitaa fiilooyinka udubdhacay dhowaan, haddii ay tahay fiilooyinka ay qaadato iyo waxa ay kuu sharxi doonto, ma aha kuwa wanaagsan.. »
Emmanuel Macron waa in si fiican loo caddeeyo caawa uu fikirkooda ku saabsan tallaabooyinka nacaayo sida in dib loo dhigo mid ka mid ah da'da hawlgabka ah, ama dhamaadka saacadood 35, ama xitaa ka kaxayntu ay of fasax ah, cabiraya qaybi in xitaa inta badankiisa. Waan fahamsanahay sababta Qof kastaa wuxuu qabtaa neefsashadooda ".
Wax qalad ah malaha biloowga Yurub
Madaxweynuhu dhab ahaan xaq uma laha in uu khalad sameeyo ka dib shan bilood oo bannaanbaxyo. Waxaa intaa dheer macallinka sayniska ee Paris Paris, Bruno Cautrès jimicsi waa halis u ah madaxa gobolka: " Emmanuel Macron wuxuu soo gudbin doonaa jimicsiga shirweynihii hore ee saxaafadda, isagoo su'aal ka weydiiyay suxufiyeyaasha oo fiyoobi doona. Xayeysiisyada, qaabka guud, ayaa shaaca ka qaaday in ka badan toddobaad ka hor. Sidaas darteed shaki kuma jiro in Emmanuel Macron lagu dari doono su'aalo gaar ah oo ku saabsan hirgelinta, macnaha, kalandarka. Sidaas darteed jimicsi adag ".
Madaxweynuhu waa inuu si weyn u dib u celi gacanta Si loo rajeeyo, sida uu rabo, in la bilaabo Xeerka II ee muddada shan sano ah, taas oo ah in la yiraahdo, si ay u sii wataan dibuhabaynta lagama maarmaanka ah ee dalka. Haddii kale, ganaaxu wuxuu noqon karaa mid aad u dhakhso badan; horey ugu jirtay sanduuqa codeynta, hal bil oo ah doorashooyinka Yurub.
Rami Malek ayaa ku dhawaaqay inuu yahay dadka cusub ee James Bond - dadka
Gregory Owona: "Mahadsanid Madaxweynaha Paul Biya, shaqo la'aanta ayaa ku jirta isbedelka Cameroon ..."